Qubsuma Koo 32፡ "Jireenya rakkisaa kan taasisu aadaasaaniiti" - BBC News Afaan Oromoo
Qubsuma Koo 32፡ "Jireenya rakkisaa kan taasisu aadaasaaniiti"
Image copyright ABRIHAM TAMIRU
Abrahaam Tammiruu biyya Turkii keessa Sakaariyaa bakka jedhamtu jiraata. Bara 2013 keessa mootummaan Turkii carraa barumsaa keninaaniif gara biyyasanaatti imale. Tekinooloojiiwwan kompiiteraa barnoota waliin walitti fiduun sirriitti qorataa akka jiru dubbata Abrahaam.
Waa'ee bakka jiraatuu, Sakaariyaa yeroo dubbatu km190 Istaambulirraa fagaatti jedha. Magaalattiin magariisadha; kirkirri lafaa yeroo baayyee waan mudatuuf gamoon abbaa darbii shanii ol ijaaruun waan hin eyyamamneef gamoowwan dheddheeroo hin mullatan jedha.
Baayyinni uummatashee 90000'tti kan dhiyaatu yommuu ta'u jeequmsi kan keessa hin jirreefi tasgabbii kan qabdu waan taateef barattootaaf kan mijooftudha.
Abrahaam Finfinneetti dhalatee guddate. Finfinneefi bakka amma jiraatu walbira qabee yeroo ilaalu, Finfinneen jeeqamtuufi wacatu itti baayyata Sakaariyaan garuu tasgabbooftuufi tajaajilli geejjibaashee kan si'ataa ta'eefi nageenyishee kan eegamedha jedha.
Image copyright Xorun Normatov
"Asitti alkan yoo deemnellee kan nama sodaachisu hin jiru, Finfinneetti garuu alkan saatii afurii booda kun kan yaadamu mit."
Nama biyya ormaa
Abrahaam akka gara magaalaa Sakaarii deemeen waggaa tokkoofi afaan baratu qaba ture. Kanaaf, yeroo barumsarraa deebu yeroo dheeraa waan qabuuf magaalattiin callistuu ta'uuniifi sochiifi waca Finfinnee dhabuun amma tokko dhiibbaa akka irratti taasise yaadata.
Jalqabarratti mukaa'aan ture kan jedhu Abrahaam, kun nameenyaakoorratti dhiibbaa fide qaba jedha. "Dur hiriyyootakoo waliin bashannanuun jaalladhan ture amma garuu akkan waanta garagaraa gadi fageessee yaaduun anarra jiruuf nama dubbisu akkan ta'u na godheera," jedha.
Abrahaam kanaan dura bakka namoonni amanaa Islaamaa hordofan qofa jiraatee waan hin beekneef erga gara Sakaariyaa deemee xiqqoo akka itti wallaalee ture yaadata.
Akka jedhutti naannoo sanatti waldaa kiristaanaa dhabuufi yeroo akka ofiisaa kiristaana ta'e lammileen Turkiitti himu miira fuulasaaniirratti argu baruudhaaf rakkatee ture.
Kan biraan kan taajjabe, hariiroo isaan lammiilee biyya biroorraa ta'an waliin qabaniin kan of qaban ta'uusaaniiti. Dubartoota mana barumsaatti beeku waliin argamuun; dhiirri gurraachi dubartootasaanii waliin argamuun isaa akka qalbii namoota baayyee arkisu hubateera.
"Magaalatiin xiqqoo waan taateefis, Istaanbul caalaa waan hunduu adda ta'ee ba'ee mullata."
Aadaan Turkii jireenya keenya rakkisaa taasiseera jedha waggaa duraa yeroo yaadatu; barattoonni biyya biraarraa dhufne lakkoofsaan xiqqoo waan turreef jiraattota magaalattii waliin walitti dhiyaachuuf yaalii taasifnullee namoota biyya biraarraa ta'aniif of kennoofi banamoo waan hin ta'iiniif jireenyakoo rakkisaa taasiseera jedha.
Biyya maaltu fakkaata
Magaalaa keessa jiraatu Sakaariyaa keessa lammiin Itoophiyaa keessa jiraatan waan hin jirreef yoo yaadatellee nyaata Itoophiyaa bakka argatuu kan hin qabne Abrahaam "Barattoonni Itoophiyaarraa dhufan waan jiraniif isaan waliin walitti qabamnee gogoofi biddeena waliin nyaanna," jechuun akkamitti dharraa biyyaa akka itti ba'u dubbata.
Abrahaam Sakaariyaa barumsaafi jireenyaaf erga filatee booda kan soorachuu jaallatu nyaata Turkiidha. "Lahimaajun" jedhama. Laahimaajuun qiixxaa haphiirra foon daakame itti dabaluun kan qophaa'udha. Magaalaa kana keessatti Laahimaajun nyaachuun na gammachiisa. Kebaabiin garuu zayitiin waan itti baayyatuuf natti hin tolle."
Dharraa bunaa qabu ba'uuf jecha kaaffeewwan gara garaatti garee Buna Itoophiyaa kan jedhu argulleen dhamdhamnisaafi urgaan isaa hanga kan biyya isaa akka hin taane ni dubbata. Kanaaf Abrahaam dharraa bunaa yeroo barbaadu ba'uu mana hiriyyaasaa Itoophiyaarraa ta'e jabanaa qabu deemuun waliin danfisaanii akka dhugan dubbata.
Biyyaa kan yaadu Abrahaam, "Galgala galgala hiriyyoonni, maatiin isaa buna danfisanii walitti dhufanii waliin taphatan yeroo hundaa ijakoo dura jira," jedha.
Miidhagina Sakaariyaa nama hawwatu
Yeroo Sakaariyaa jiraatutti foddaadhaan yeroo gadi ilaalu kan qalbiisaa gammachiisu hora Saapoonjee jedhamudha.
Finfinnee osoo jiruurraa barumsaaf yeroo iyyatuufi Yuunvarsiiticha yeroo filatuu jalqabee hara kana argee baayyee jaallatedha.
Horri sun kan argamu Fakaaltii Artii fuula duratti yommuu ta'u bakka bashannaanaa Fakaaltichaa fuula duraan teessumawwan dalgee jiranirra taa'ee yeroo ilaalu akka baayyee gammadu dubbata.
Bakki magariisaafi margii dhedheeroon hora kana cinaatti biqilan miidhagina addaa kennuuf.
Ganama ganama namoonni qarqara Hora kanaatti sochiiwwan ispoortii gara graa yeroo ilaalaniifi namoota Istaambul dhaqanii galan yeroo ilaalan miira addaa namatti hora jedha Abrahaam.
Sakaariyaarraa gara Finfinnee
Magaalaan Sakaariyaa xiqqoo waan taateef qulqullina isheen qabdu kan nama hawwatudha kan jedhu Abrahaam, osoo waanti ammaaafi ammatti jijjiiruun danda'u jiraatee qulqullina magaalattii osoon akka Finfinneen dhaaltun godha jedha.
Finfinneetii Piyaassaaf jalala addaa akka qabu kan dubbatu Abrahaam, osoon danda'ee amma libsuu ijaatti ka'ee achi bu'ee nan gammada jedhe.
Piyaassaatti argamee osoon hiriyyootakoo waliin miillaan bashannanee, buna dhugee natti tola jechuun yaadasaa xumura Abrahaam.
Qubsuma koo 25: Biyyatti qilleensa naannoon itti dhaladheen barbaada